Maxay Tahay Sababta Aanan Marnaba U Dhicin War Saxaafadeed Adeegyada Qaybinta | Martech Zone
Mid ka mid ah macaamiisheenna ayaa maanta naga yaabiyey, waxay na soo ogeysiiyeen inay saxiixeen a War-Saxaafadeed Qaybinta adeegga ay ku talisay mid ka mid ah la-hawlgalayaashooda halkaasoo ay ugu qaybin karaan warsaxaafadeedkooda in ka badan 500 oo goobood oo kala duwan. Isla markiiba waan taahay… waa kan sababta:
Adeegyada Qaybinta Saxaafadda darajo ha dhigin waxyaabaha aad kobciso gabi ahaanba, marka qof mooyee si firfircoon u dhageysanayo war-saxaafadeedyo gaar ah, badanaa laguma helin natiijooyinka raadinta.
Adeegyada Qaybinta War Saxaafadeed waxaa hareeyay naxdin, tacaluqda shirkadaha. Xidhiidhka ka dhasha badanaa wuxuu ubaahanyahay kala-qaadis la'aanta Maamulayaasha Degmooyinka si loo yareeyo halista waxyeelada natiijooyinka mashiinka raadinta.
Adeegyada Qaybinta War Saxaafadeed waa waxtar la'aan. Markii ugu dambaysay ee aan adeegsanay waxaan arki lahayn shixnad ganacsi ah oo aan wax saameyn ah ku yeelan doonin martida, raadinta, ama waxtar kale.
Haddii ay u muuqato mid aad u fudud, waa sababta. Kaliya maahan wax aad u fudud, qarash gareeynta waxoogaa lacag ah maanta waxay kuu sababi kartaa kumanaan doolar waqti aad ku bixisay waqti dambe si aad u baarto oo aad u diido xiriiriyaasha.
Baahinta War-Saxaafadeed ee ku Saabsan Qaybinta
Haddii aad runtii rabto inaad ka hor gasho dhagaystayaasha saxda ah ee goobaha saxda ah, habka ugu fiican ee adiga kugu habboon waa inaad horumariso liistada bogagga bartilmaameedka ah ee mawduucaagu si aad ah ugu habboon yahay isla markaana ay bogaggu awood ugu leeyihiin internetka. Habka ugu wanaagsan ee lagu hubiyo ku-xirnaanshaha waa iyada oo loo marayo qiimeynta mashiinka raadinta ee jira iyadoo la adeegsanayo qalab sida Xeebaha ama caan ku ah bogga sida Buzzsumo.
Haddii aad aqoonsan karto 25 illaa 50 bog oo labaduba ah kuwo awood leh oo caan ku ah mowduuca, hadda waad sameyn kartaa xoogaa qodis ah oo aad garataa sida loola xiriiro milkiilaha goobta. Madal ay ka mid yihiin go'aan u soo bandhig shirkad leh habab lagu bartilmaameedsado oo farriin loogu diro bogaggaas. Nidaamyadoodu waxay sidoo kale bixiyaan xulashooyin otomaatig ah codsiyada soo noqnoqda, ka warbixinta saameynta xiriirkaaga bulshada, iyo xitaa u oggolaaneysa jawaab-celin ama ka-noqoshada suxufiga la bartilmaameedsaday ama saamaynta.
Waqti ku qaad inaad soo saarto garoon weyn. Akhriso dhowr qoraal oo laga soo diray barta wax-ku-oolka si aad u dareento nooca qorista ay sameeyaan iyo macluumaadka ay u baahan karaan. Ka dib farsamee fariin iyaga oo ku ogeysiinaya warkaaga, xaglaha laga bixin karo goobta, kuna deeqo wixii hanti ah ee kale sida sawirrada ama fiidiyowyada si saameyntu si fudud isugu soo ururiyo maqaal.
Macaamiilkan, waxaan ku haysannay hal telefishan oo muhiim ah gobol ahaan, waxaannu ku sheegnay ilaha ganacsi ee gobol kasta, waxaanna dhowr jeer ka sheegnay dhammaan daabacadaha muhiimka ah ee warshadaha. Saamaynta guud waxay ahayd mid layaableh bogguna wuxuu kusii wadaa inuu sifiican ugujiro ereyada muhiimka ah.
Si kastaba ha noqotee, marka la qaybiyo qaybintaan, waxaan hadda ku qasbanaaneynaa inaan kormeerno barta dib-u-xiriirinta xun maxaa yeelay ma dooneyno inay qiimeyntooda raadinta dabiiciga ah ay ku dhacdo haddii Google ay rumaysan tahay inay ka baxayaan been-abuurka boggaga qaybinta ee 'backlinks'. Marka, kaliya qaybinta ma shaqeyn, ee waxay nagu keenaysaa murugo dheeraad ah markaan kormeerno qiimeynta bogga iyo mashiinka mashiinka raadinta dabiiciga ah.
Tags: backlinksbuzzsumogoyntaprpr qaybintawar-saxaafadeedqaybinta warsaxaafadeedsemrush